Samsung Galaxy S9 hadda waa rasmi, dhammaan qeexitaannada iyo astaamaha cusub ee Samsung flagship | Androidsis
Qolka Ignatius | | Aaladaha Android, MWC, Samsung
Ku dhowaad hal sano oo xan ah, waxaan aakhirkii awood u yeelanay inaan ka baxno shakiga oo aan hubinno wararka xanta ah ee ugu dambeyntii la xaqiijiyay iyo kuwa ka dhashay maskaxda kulul ee dadka qaar oo leh rabitaan aan caadi ahayn oo caan ah. Daqiiqado uun baa laga joogaa markii bandhiggu dhammaaday laakiin Waxaan hadda xaqiijin karnaa dhammaan faahfaahinta calanka cusub ee Samsung.
Mid ka mid ah hal-ku-dhegyada soo jiita dareenka ugu badan, waxaan ka helaynaa kamaradda S9, kamarad in kasta oo uu leeyahay hal muraayad oo keliya, ay na siiso wax ka badan astaamaha cajiibka ah, astaamaha noo oggolaanaya inaan xilliyada ku qabsanno qaab aad u fudud mahadsanid furitaanka isbeddelka f / 1,5-f / 2.4, farsamo aanan aqoon. Waxaan ku arkay meel kale oo aan la hayn.
1 Kaamirada Samsung Galaxy S9
2 Samsung Galaxy S9 + kamarad
3 Gudaha Samsung Galaxy S9 iyo S9 +
4 Samsung Galaxy S9 iyo S9 + shaashadaha
5 Samsung Galaxy S9 qeexitaannada
6 Samsung Galaxy S9 + Sooc
7 Amniga Samsung Galaxy S9 iyo Galaxy S9 +
8 Qiimaha Samsung Galaxy S9 iyo taariikhda la siidaayo
9 Samsung Galaxy S9 + qiimaha iyo taariikhda la siidaayo
Kaamirada Samsung Galaxy S9
Hagaag, hadaanan tixgelin siinaynin nooca qolofta ee shirkada Kuuriya ay sanadkii hore ka billowday dalkeeda, terminaal na siiya nidaam furitaan beddelaad leh oo aan ku qabsan karno daqiiqad kasta xaalad kasta, illaa inta aan ognahay sida si aad uga baxdo.faa'iidada ugu badan, wax aad u fudud mahadsanid qaabka otomaatiga ah.
Furitaanka ugu yar, f / 1,5, wuxuu noo oggolaanayaa inaan daqiiqado ku qabsanno iftiin aad u yar waxaana u mahadcelinaya nidaamka yaraynta dhawaqa otomaatigga ah ee Samsung, natiijooyinka ay soo gudbisay terminalku waa kuwo cajiib ah, maqnaanshaha jir ahaan tijaabinta xarunta si dib-u-eegis loo dhameystiro loona xaqiijiyo awooda ay bixiso kamaradan cusub ee is bedbedesha.
Kaamirada hore ee Galaxy S9 ficil ahaan waa isku mid wixii aan ka heli karno kii ka horreeyay, laakiin leh shidma cusub taas oo si weyn u wanaajisa tayada qabashada. Kaamiradani waxay na siineysaa xallinta 8 mpx, furitaanka f / 1,7 iyo autofocus.
Samsung Galaxy S9 + kamarad
Farqiga ugu weyn ee Galaxy S9 + uu na siinayo annaga oo ixtiraameyna kii isaga kahoreeyay, waxaan kaheleynaa kamarad labajibbaaran, labo kamarad oo na siineysa natiijooyin aad u la mid ah kuwa aan hada ka heli karno Galaxy Note 8, terminal-ka koowaad ee shirkadda leh laba qol nidaam. Sida Galaxy S9, dhabarka gadaal waxaan ka helaynaa 12 mpx lens oo leh furfurnaan f / 1,5 ilaa f / 2.4 iyo lens-xagal ballaadhan oo leh aperture f / 2,4.
Marka laga hadlayo kamaradda hore, markale Kuuriyaanka Samsung waxay doorteen inay hirgeliyaan a 8 mpx kamarad hore oo leh f / 1,7 aperture leh autofocus, inkasta oo ka duwan midka aan ka heli karno Galaxy S8 iyo S8 + dareeraha ayaa la hagaajiyay.
Gudaha Samsung Galaxy S9 iyo S9 +
Riwaayad kale oo ay soo bandhigtay jiilkii sagaalaad ee Galaxy S9, waxaan ka helaynaa qaddarka RAM ee laga heli karo labada nooc. Aad u badan Galaxy S9 sida Galaxy S9 wuxuu na siinayaa 6 GB oo RAM ah, in ka badan xaddiga ku filan ee RAM si markaa furitaanka codsiyada xusuusta ay aad uga dhakhso badan tahay marka lagu daro bixinta dheecaanka weyn ee nidaamka oo dhan.
Dhanka processor-ka, ma helayno wax cusub, maadaama moodeelkan cusub loo heli doono laba nooc, oo loogu talagalay suuqyo kala duwan. Dhinac waxaan ka helaynaa Qualcomm Snapdragon 845 ee Maraykanka, Latin Amerika iyo Shiinaha, halka Exynos 9810 wuxuu noqon doonaa processor kaas oo maamuli doona dhamaan Galaxy S9 iyo Galaxy S9 + oo yimaad labadaba yurub sida wadamada kale.
Samsung Galaxy S9 iyo S9 + shaashadaha
Samsung waxay la socotaa isbeddelka sanadkii hore, waxay qaadatay shaashad 5,8-inch ah oo loogu talagalay Galaxy S9 iyo shaashadda 6,2-inch ee Galaxy S9 +. Mar labaad waxay ku sii socotaa sharadka shaashadda aan dhammaadka lahayn, waa erey ay shirkaddu ku aasaastay soo saarista Galaxy S8 iyo S8 +. Labada terminaalba waxay na siinayaan saamiga 18.5: 9, iyada oo aan sharad lahayn wakhti kasta oo ku saabsan qaan-gaadhka ka dhigay iPhone X moodada, iyo in soosaarayaal badan ay bilaabeen inay korsadaan.
Mar labaad Galaxy S9 iyo S9 + waxay isticmaalaan shaashad nooca SuperAMOLED leh a xallinta labada qalab 2.960 x 1.440 pixels, iyadoo isla saamiga shaashadda uu noqday kan ugu isticmaalka badan dhammaan boosteejooyinka soo gaadhay suuqa sanadkii la soo dhaafay tan iyo markii Samsung ay soo bandhigi doonto S8 iyo S8 +.
Samsung Galaxy S9 qeexitaannada
Faahfaahinta farsamada Samsung Galaxy S9
Tusaale Galaxy S9
Nidaamka hawlgalka Android Oreo 8.0
Screen 5.8 inji - 2.960 x 1.440 dpi
Gacaliye Exynos 9810 / Snapdragon 845
Kaydinta gudaha 64. 128 iyo 256 GB oo lagu ballaarin karo kaararka microSD
Kaamirada gadaal 12 mpx oo leh furfurnaan f / 1.5 ilaa f / 2.4. Muuqaal gaabis ah oo fiidiyoow ah 960 fps
Kaamirada hore 8 mpx f / 1.7 oo leh autofocus
Xuduudaha kala duwan Bluetooth 5.0 - Qalabka NFC
Tilmaamo kale Dareenka faraha - Furashada wajiga - Sawirka Iris
Batariga 3.000 Mah
Cabbirada X x 147.7 68.7 8.5 mm
Peso Gram 1634
Qiimaha 849 euros
Samsung Galaxy S9 + Sooc
Faahfaahinta farsamada Samsung Galaxy S9 +
Tusaale Galaxy S9 +
Nidaamka hawlgalka Android 8.0
Screen 6.2 inji - 2.960 x 1.440 dpi
Kaydinta gudaha 64 128 iyo 256 GB oo lagu ballaarin karo kaararka microSD
Kaamirada gadaal 2 kamaradaha 12 mpx. mid leh furfurnaan f / 1.5 - f / 2.4 iyo xagal ballaadhan oo ballaadhan f / 2.4. Dhaqdhaqaaq gaabis ah 960 fps
Batariga 3.500 Mah
Cabbirada X x 158 73.8 8.5 mm
Peso Gram 189
Amniga Samsung Galaxy S9 iyo Galaxy S9 +
Sida boosteejooyinka badankood ee suuqa soo gaadhay bilihii la soo dhaafay, gaar ahaan ka dib markii la soo bandhigay iPhone X, Galaxy S9 iyo S9 + cusub ayaa sidoo kale na siinaya a nidaamka aqoonsiga wajiga, marka lagu daro dareeraha faraha dhaqameed iyo akhristaha iris. Way cadahay in Samsung ay diirada saartay bixinta nidaamka amniga oo ka dhigaya terminal-ka ficil ahaan nacasnimo.
Qiimaha Samsung Galaxy S9 iyo taariikhda la siidaayo
Waxaa jiray warar xan ah oo badan bilihii la soo dhaafay, taas oo lagu sheegay in calaamadaha cusub ee Samsung ay ka badnaan karaan 1000 euro, oo ah qaabka leh awood yar. Sidaan maalmo ka hor kugula socodsiinay, qiimaha Samsung Galaxy S9 wuxuu ka bilaabmayaa 849 euro.
Qaabkan waad ballansan kartaa hadda Laga bilaabo Maarso 8, isticmaalayaasha kaydiya waxay bilaabi doonaan inay helaan, laakiin ma noqon doonto illaa iyo 16-ka Maarso, markaasoo terminalkani si rasmi ah suuqa u gaaro.
Samsung Galaxy S9 + qiimaha iyo taariikhda la siidaayo
Sannadkii hore, farqiga u dhexeeya Galaxy S8 iyo S8 + wuxuu ahaa 100 euro. Sannadkan, farqiga ayaa weli sidii ah, sidaas Galaxy S9 + ayaa suuqa ku gali doona 949 euro, 100 euro in ka badan walaalkiis ka yar.
Sida walaalkeed ka yar, moodeelkan Hadda si toos ah ayaad uga ballansan kartaa bogga rasmiga ah ee Samsung, laakiin maahan ilaa iyo 8-da Maarso ee soo socota marka adeegsadayaasha ugu horreeya ee sameynta boos celinta ay billaabaan inay helaan. Haddii aadan xiiseyneynin inaad keydiso, waa inaad sugto illaa 16-ka Maarso, oo ah taariikhda ay Samsung u xushay furitaanka suuqa ee terminalkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Samsung Galaxy S9 hadda waa rasmi, dhammaan qeexitaannada iyo astaamaha cusub ee Samsung
Kuwani waa natiijooyinka la sifeeyey ee Mediatek P60, oo ah jajab loogu talagalay bartamaha dhexe ee Android